I-Monster ngu-Kanye West (kunye noNicki Minaj noJay-Z kunye noRick Ross) - Izinto Zobugcisa
Ekuqaleni yayenzelwe i-albhamu yokusebenzisana yaseKante West Jonga iTrone kunye noJay-Z, 'iMonster' yavela Ubumnandi obumnyama obuGqwesileyo endaweni yoko kwaye wakhululwa njenge-albhamu yesithathu engatshatanga.
Ingoma inaba rappers uNicki Minaj kunye noRick Ross kwaye bonke abadlali abane bathatha abo babathiyileyo kwiingoma zabo. UJustin Vernon weBon Iver ngomnye umculi weendwendwe kwaye uyavula kwaye avale umkhondo.
UVernon usebenze kunye neNtshona kwingoma ethi 'Yilahlekile kwiLizwe' isuka kwiChicago MC's Ubumnyama obuGqwesileyo icwecwe. Uxoxe ngokusebenza neNtshona kudliwanondlebe kunye naye I-Pitchfork Ndicinga ukuba uyazi kakuhle ukuba ungubani, kwaye ndiyamqhwabela izandla, utshilo umculi. Kuthatha amandla amaninzi ukuhlala nje ukuba uphakathi kwayo yonke into-aphantsi kwayo. Kodwa ndimfumene ngokungathi ubhuti. Ungathetha naye ngayo nantoni na. '
URoss uxelele iMTV News ukuba ebengacwangciswanga ukuba abe kwingoma kwasekuqaleni. Kwakungafanelekanga ukuba ndibekhona kwirekhodi. Bendihlala kwenye indawo ndisebenza nenye iKanye, utshilo uMiami MC. Ndangena, ngathi, 'inkulu kakhulu le.' [Kanye] wayefana, 'Ewe.' Wayedlala itrekhi, etshicela iivesi zakhe kum. Kulapho engekayibeki nokuyibeka. Ndifana, 'Iyingozi.' Kwangelo xesha, mna ndingumntu ophithizelayo, ndicinga nje nge-intro yerekhodi. Undixelele isakhiwo kunye nendlela afuna ukuba sihambe ngayo. Ndimxelele ukuba yile. Nantso indlela ebendinokuyenza ngayo. Wayethetha nayo. Mna ndingumculi ndim, bendihleli apho ndithetha naye kwaye ndeza nebhulorho ye-intro. Kwakungekho vesi konke konke. Yayiyintetho nje okanye ibhulorho ukuseta ithoni yokuba 'Ningene. UJay wayicima.'
URoss uxelele i-MTV News ukuba wayechukumisekile yindlela uMinaj wayakha ngayo iivesi zakhe emva koko wazibeka phantsi: 'Ngokwenyani ndandisesitudiyo kunye noKanye eHawaii xa wayendidlalela le nto,' uyakhumbula. Ndibethwe ngumoya. Ndandinethuba lokuhlala estudiyo ngelixa uNicki ebhala ivesi yakhe ngaphandle kwerekhodi. Ngelo xesha ke wandifumana imbeko njengombhali weengoma. Wayengumntu othanda ukonwabisa de kube ngulo mhla ndahlala estudiyo ndambukela esiza nento endivakalelwa kukuba yenye yeendinyana zonyaka. '
UMinaj uxelele i-MTV News ukuba wathi akuva umkhondo ngaphambi kokuza nendinyana yakhe, igalelo laseNtshona kunye noJay lalingekabikho kuyo. Oku kuluncedo njengoko ukungabikho kweenkwenkwezi ze-MCs kwenza ukuba umlobi omncinci wasetyhini agcine amandla akhe e-screwball. Akukho vesi yomntu ibisengomeni okwangoku, utshilo. 'Bendinendawo yokudlala evulekileyo, kwaye ndingenza nantoni na endifuna ukuyenza. Ukuba bendimvile uKanye noJay, ngendikhuphe ipunk. Andizukuyala kodwa ndicinga ukuba ngendibunciphisile ubuchule bam.
I-Jake Nava ephikisanayo yayalela ividiyo, ebonisa ukuhlaselwa kweempawu ezingcolileyo, amaqela aphikisayo amakhosikazi awalungiselela isikhalazo esithi ikliphu iqhubela phambili ubundlobongela obujoliswe kwabasetyhini kwaye iyonwabisa ubu-misogyny.
Ngaba uyibambile UNapoleon Dynamite Isalathiso kumagama? 'Wenza ntoni ngoku? Nantoni na endifuna ukuyenza, nkosi! ' Le yinto uNapoleon ayithethayo kwasekuqaleni kwifilimu ka-2004.
Ngethuba lakhe kunye noKhan West, u-Justin Vernon wazifumana esebenza iiyure ezingama-18 ebeka iingoma zomculo kunye nobunjineli ukurekhoda okumbalwa, njengevesi likaRick Ross kule ngoma. Ukhumbule ukuba Jikelezisa 'URick Ross wayeza kuhlala apho ixesha elininzi ngelixa ndisebenza kwi-s - t, kwibhentshi lepiyano emva kwam, nditshaya buthuntu emva kokuphambana. Phakathi kokuthatha, wayephefumla kwaye athi cwaka ngokwenene, 'Bekukuhle oko, homie.' Ndingathanda ukuba, 'Kulungile! Ndiza kuqhubeka! ''
I-West yamkelwe kwi-MTV News 'Sway ukuba ivesi kaMinaj yayintle kakhulu, waphantse wayinqumla ngokuzingca.
Minaj uxelele Amatye agiqekayo malunga nokuphefumlelwa kwindinyana yakhe. '(Kanye West) uthe,' Ufuna ntoni? ' Endaweni yokubhala i-rap, ndibhale amaphepha kunye namaphepha anje, 'Ndiyagula ngabantu abathetha ngale nto, ndidiniwe ngabantu abathi ndinguye' -babhali kwincwadana, ngokusisiseko. Emva koko ndiyifunde ndayiphendula, ndagxininisa izinto ezinkulu ndaza ndazifaka kwifom rap. '
Ingoma ibuyele kwitshathi ye-iTunes ngoJanuwari 2016 emva kokuba uAdele egqibe ivesi likaNicki Minaj kwi-hit Ngexesha lokuvela kwi IKaraoke kaJames Corden yeCarpool.
Ukuthetha ngenkqubo engemva kwengoma yakhe kwi-Instagram yakhe, uNicki Minaj utyhile ukuba ingoma yayiphantse yashiywa Ubumnandi obumnyama obuGqwesileyo :
'U-Kanye unditsalele umnxeba ukuba andixelele uJay ukuba abeke ivesi kule ngoma kwaye ebesathatha isigqibo sokuba uza kuyifaka kwi-albhamu yakhe,' ubhale watsho uMinaj. 'Kwakunjengomnxeba weyure apho ndazama ukumqinisekisa ukuba avumele ingoma ihlale kwi-albhamu yakhe. Waziva ukuba le ndinyana iyakuphela ibe yintetho yecwecwe. Ndithe: 'UYA KANYE WEST !!!!'
UMinaj wongeze: 'Ndalwa nawe yonke inyathelo lendlela kodwa yaphumelela. (Wayefuna ukuba ndongeze elo lizwi lirhorho kwaye ndaziva ukuba kuphelile ukubulala.) Akazange anikezele. Ekugqibeleni, mhlawumbi wayenyanisile. Hayi! '
Inombolo yeengelosi ezi-5 ezinentsingiselo
ndifuna ukuthandana nawe
andifuni kubona ukukhanya kwakho
cyndi lauper - ixesha emva kwexesha lyrics